November 3, 2010 by chowutyee
အင်တာနက် မရတာနဲ့ ဟင်းသစ် မတင်ဖြစ်တာ ကြာသွားပါတယ်။ ခုမှပဲ ရတုန်း မြန်မြန် တင်ဖြစ်တာပါ။ ဒီဟင်းလေးကတော့ ကြက်သားနှင့် ဟင်းရွက်များကို ဘောလုံးပုံ အလုံးလေးများ လုပ်ပြီ ချက်ပြုတ်ထားမို့ အလွန်ထူးခြားပြီ စားလို့လည်း အရမ်းကောင်းပြီ ဟင်းသစ်တမျိုးဖြစ်ပါ။ တူတူလုပ်စားကြည့်ရအောင်…
၆။ ပြီးလျှင် မုန်လာဥနီ၊ ဂေါ်လာခါးသီး၊ ရွှေဖရုံသီး၊ အားလူး လုံးလေးများကို ထည့်၍ ရေတစ်ခွက်ခန့်ထည့် တည်ထားပေးပါ။ ဟင်းရွက်များ နူးသည်အထိ နောက်တစ်ရေ ထပ်ထည့်တည်ပေးပါ။
၇။ ထို့နောက် အရသာအပေါ့ အငံအတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ကြက်သားမှုန့်(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်)၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ နှမ်းဆီ ထည့်မွှေပေးပါ။
၉။ ကော်မှုန့်(စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း)ကို ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ရေမွှေပြီ လောင်းချပြီ မွှေလိုက်ပါ။
၁၀။ ရောင်စုံဘောလုံး ကြက်သားလုံး နှင့် ဟင်းရွက်စုံကြော်ကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး….
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 15 Comments
ဟုတ်တယ် မနိုင်ရေ အလုံးလေးတွေ လုပ်ဖို့ Scoop တံလေးတော့ ၀ယ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအတံလေးက တော်တော် အသုံးဝင်တာ။ သစ်သီးတွေလည်း Design ဖော်လို့ရသေးတယ်.. 😛
very cute and attractive dish. 🙂 thanks for posting it.I will try to cook like that …
Thanks Lace! Plz try it.. It is really nice dish! 😀
good job pig yee…..i wanna try too but lazy to do ballon hee so wait for you to cook for me 😉 wanna eat now
ma pls show me အလုံးလေးတွေ လုပ်ဖို့ Scoop တံလေး
photo…i don’t know this scoop…wanna buy…thank u for ur
dish….look delicious n beautiful…
suakayi ရေ Scoop တံလေးကို ရိုက်ပြီ နောက်နေ့ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်။ လုပ်စားကြည့်ပါ တကယ်ကောင်းတယ်.. 😛
i wiill try….Thanks ma … 🙂
သင်းသင်းရေ scoop တံကို သံဈေးမှာ ရောင်းတယ်။ သံဈေးရှေ့က စတီဟင်းချက်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာလည်း ၀ယ်လို့ရတယ်… 🙂